LEGO လုပ်ပါ Marvel minifigures တွေမှာ hidden character တစ်ခုပါ ၀ င်လား။
31 / 07 / 2021 31 / 07 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 472 Views စာ0မှတ်ချက် 71031, 71031 Marvel စတူဒီယို, ပုရွက်ဆိတ်-Man, Captain America, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Disney+, Lego, lego coll ပါ, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, LEGO စုဆောင်း Minifigures 71031 Marvel စတူဒီယို, Lego Marvel, Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego Spider-Man, Marvel, ပတေရုသက Parker, Scarlet စုန်းမ, စကော့လန်း, Scarlet စုန်းမ, နောကျတှဲရထား, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?
အဆိုပါ Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား စူပါဟီးရိုးရုပ်ရှင်လောကစကြဝာမှပရိသတ်များအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဇာတ်ကောင်ရွေးချယ်မှုရှိသည်၊ သို့သော်၎င်းရှိသည် 71031 Marvel စတူဒီယို အင်္ဂါရပ်တစ်ခု extra ဇာတ်ကောင်လား
တရားဝင်ပုံများပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် 71031 Marvel စတူဒီယို Alligator Loki နှင့် Throg ကဲ့သို့အုတ်အပြည့်ပါ ၀ င်သောဇာတ်ကောင်များဖြင့်ကိုယ်စားပြုထားခြင်းမရှိသောနောက်ထပ်ဇာတ်ကောင်များကိုစီးရီးတွင်ထည့်သွင်းထားသော minifigures များနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုပြသသည်။ သို့သော်အချို့ပရိသတ်များကစကော့လန်းသည် Zombie Hunter Spidey နှင့်လည်းပါဝင်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။
Ashnflash သည်ဗွီဒီယိုအသစ်၌အကြောင်းအရာကိုစူးစမ်းခဲ့သည်၊ ဤအပို ဦး ခေါင်းသည်ဖုံးကွယ်ထားသော Peter Parker (သို့) Scott Lang ကဲ့သို့အခေါင်းစွပ်ဖြစ်ရန်ရှိမရှိဟူသောမေးခွန်းကိုမေးခွန်းထုတ်သည်။ နောကျတှဲရထား.
အမှိုက်ပုံနှင့်အထက်ပါအိုးကဲ့သို့အချို့သောအင်္ဂါရပ်များသည်အဆောက်အ ဦး မှပျောက်နေပြီး၎င်းသည်အမှန်မှာ Peter Parker ၏ ဦး ခေါင်းဖြစ်သည်ဟူသောယုံကြည်ချက်ကိုသက်သေပြသည်။ သို့သော် Lego အုပ်စုသည် ၇၆၁၂၉ Hydro-Man Attack နှင့် (၇၆၁၂၉) အကြားကဲ့သို့အက္ခရာနှစ်လုံးအတွက်တူညီသောမျက်နှာကိုသုံးသည် 76124 စစ်ပွဲစက် Buster.
မေးခွန်းကိုတစ်ကြိမ်နှင့်တစ်ကြိမ်ဖြေဆိုရန်ကူညီပေးပါ Lego ဒီအီးရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာကိုဆုံးဖြတ်ဖို့အဖွဲ့ကိုဆက်သွယ်ခဲ့တယ်xtra ဦး ခေါင်းနှင့်ကိုယ်စားလှယ်တစ် ဦး က“ ဤအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ယခုအချိန်ထိဖြန့်ဝေထားသောသတင်းအချက်အလက်များကိုသာမျှဝေနိုင်သည်။ ငါတို့ပိုသိလိမ့်မယ်ထင်တယ်artသြဂုတ် ၁၁ ရက်ဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲ။ ဝန်ကြီးချုပ်များ Disney+။ ”
ဤအပိုပစ္စည်းသည်စကော့ကိုကိုယ်စားပြုရန်ရည်ရွယ်လျှင်၎င်းသည်ဇာတ်ကောင်စုစုပေါင်းကိုယူဆောင်လာလိမ့်မည် 71031 Marvel စတူဒီယို minifigures ၁၅ မှ ၁၂ အထိနှင့်အခြားတည်ဆောက်မှုများမှတဆင့်ဖြစ်နိုင်သည်။
သင်ကစကော့လန်း (သို့) ပီတာပတ်ကာ (PARKER PARKER) ဟုအပိုပစ္စည်းကိုသင်ယုံသည်ဖြစ်စေ၊ ၎င်းသည်သင့်အဖြစ်ဖြစ်နိုင်သည်art Zombie Hunter Spidey ၏ minifigure ၌ 71031 Marvel စတူဒီယို Scarlet Witch အပါအ ၀ င်အခြားဇာတ်ကောင်များနှင့်အတူ 1 3.49 / $ 4.99 / € 3.99 ကိုစက်တင်ဘာ ၁ ရက်တွင်ဖြန့်ချိသည်။ မူကွဲလေးခု Captain America ၏
← LEGO Bricklink ပထမအချီတွင်တိုးချဲ့ထားသောအသေးစိတ်အချက်များကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်
LEGO Harry Potter 76388 Hogsmeade Village Visit သို့သီးသန့်လျှော့စျေးရရှိနိုင်ပါသေးသည် →